China Multi Shuttle orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1 Miditra tokana mandeha ho azy Manaiky toromarika avy amin'ny solosaina mpampiantrano, dia mampita ho azy ny boaty eo amin'ny faritra buffer miditra ho any amin'ny toerana fitahirizana voafaritra.
2 Mivoaka mandeha ho azy tokana Manaiky toromarika avy amin'ny solosaina mpampiantrano, mampita boaty amin'ny toerana voafaritra mankany amin'ny farany mivoaka.
3 Famindrana mandeha ho azy Manaiky toromarika avy amin'ny solosaina mpampiantrano, mampita boaty avy amin'ny toerana voafaritra iray mankany amin'ny iray hafa.
4 Famandrihana an-tserasera Fanaraha-maso ny tokonam-baravarana herinaratra marobe, mitsara tena ary mi-charge amin'ny tsipika.
5 Fandraisana fianarana samirery Fandrefesana ho azy, fantaro ny angon-drakitra momba ny racking sy pallet, ary ampidiro tsy miankina ny parameter
6 Fampiasa lavitra Izy io dia afaka manavao sy misintona programa avy lavitra (Ao amin'ny tambajotra Wi-Fi)
7 Fanaraha-maso ny rafitra Manara-maso ny angon'ny rafitra amin'ny fotoana tena izy sy fanairana natsangana tamin'ny feo sy hazavana amin'ny toe-javatra tsy ara-dalàna.
8 Fijerena fitempon'ny fo Mifandraisa amin'ny fampiantranoana rafitra fanaraha-maso ny solosaina amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fitepon'ny fo, ny fanaraha-maso ny sata an-tserasera
9 Fijanonana vonjy maika Famantarana vonjy taitra alefa lavitra rehefa vonjy maika, ary mijanona avy hatrany ny fiara fitaterana mandra-pialana vonjy maika.
Mahay miantoka ny fijanonan'ny fitaovana na ny entana ao anatin'ny fihemorana fara-tampony izy rehefa manatanteraka io torolàlana io.
② Karazana entana inona no mety amin'ny Rafitra fitehirizana fiara mandeha amin'ny lalana efatra?
Karazana fonosana entana: daba, baoritra, kitapo sns
Ny haben'ny entana (mm): sakany: 200-600mm;Halany: 200-800mm;Haavo: 100-400mm
lanja entana: <=35kg
Haavo fiasana <=15m
Firafitra aluminium maivana.
Fitehirizana lalina tokana na roa.
Hetsika fanovana ambaratonga haingana.
Mitsimpona, mameno, fitahirizana vonjimaika, entana ho an'olona.
Famatsiana herinaratra ambany, mandany angovo kely kokoa.
Fahaizana fanodinana in-3-4 noho ny AS/RS.
④Design, Test & Warranty
Toerana fitehirizana trano fitehirizana Hala____mm ​​x Sakany____mm ​​x Haavo mazava___mm.
Toeram-baravaran'ny trano fanatobiana entana ho an'ny entana sy fampidinana entana.
Tavoahangy, baoritra Halava____mm ​​x Sakany____mm ​​x Haavo___mm ​​x Lanja_____kg.
Ny mari-pana amin'ny trano fitehirizam-bokatra_____Degrees Celsius
Fahombiazana miditra sy mivoaka: Ny habetsahan'ny koba na baoritra isan'ora_____.
Ny fiara fitaterana marobe dia hotsapaina alohan'ny fanaterana.Ny injeniera dia hitsapa ny rafitra manontolo amin'ny tranokala na amin'ny Internet.
teo aloha: Radio Shuttle misy lalana efatra
Manaraka: Radio Shuttle
Shuttle amin'ny lalana efatra, Conveyor, Drive amin'ny Racking, Baby Shuttle, Carton Live, Asrs Storage,